उच्च गुणस्तर अनुकूलन बायोडिग्रेडेबल शपिंग पुन: प्रयोज्य इको गैर-बुना टोट झोला ल्यामिनेशन कारखाना र निर्माताहरू बिना | लाङ्घाई
अनुकूलन बायोडिग्रेडेबल किनमेल पुन: प्रयोज्य इको गैर-बुना टोट झोला ल्यामिनेशन बिना
सामाग्री: 80gsm-110gsm गैर बुना कार्ययोग्य छ
(हामी तपाईको आकार अनुसार उपयुक्त सामग्री सिफारिस गर्न सक्छौं)
उत्पादन नाम अनुकूलन बायोडिग्रेडेबल किनमेल पुन: प्रयोज्य इको गैर-बुना टोट झोला ल्यामिनेशन बिना
सामग्री 80gsm-110gsm गैर बुना कार्ययोग्य छ (हामी तपाईको आकार अनुसार उपयुक्त सामग्री सिफारिस गर्न सक्छौं)
साइज 40X 30X10CM, 40X33X10CM, 45X30X14CM वा कुनै पनि अनुकूलित आकार।
लेमिनेशन प्रकारहरू ग्लोसी ल्यामिनेशन / म्याट ल्यामिनेशन / लेजर फिल्म ल्यामिनेशन / नो लेमिनेशन, आदि।
कारीगरीहरू तातो-सील (अल्ट्रासोनिक), "X" सिलाई, मेसिन सिलाई, आदि।
मुद्रण रेशम मुद्रण, गर्मी स्थानान्तरण, अफसेट मुद्रण
प्रयोग किनमेल, पदोन्नति, उपहार, किराना, सुपरमार्केट, विज्ञापन, कपडा, वाइन बोतल, प्रदर्शनी, आदि।
उत्पादन क्षमता प्रति महिना 60000 टुक्रा गैर बुनेको झोला अनुकूलन प्रिन्ट
प्याकिङ OPP झोलामा प्याक गरिएको, 200 टुक्रा झोला एक दफ़्तीमा प्याक गरियो
द्रुत कार्य: हामी 1 घण्टा भित्र ग्राहक सोधपुछ जवाफ दिनेछौं।
व्यावसायिक सेवा: सोधपुछबाट -> नमूना बनाउनुहोस् -> अर्डर सुरु गर्नुहोस् -> निरीक्षण-> डेलिभरी
हामीसँग प्रत्येक ग्राहकको लागि 1 देखि 1 विशेष सेवाहरू छन्। ग्राहकलाई प्रत्येकलाई नियन्त्रण गर्न दिनुहोस्
अर्डरको चरण। हाम्रो सेवाको आधारमा, तपाईं राम्रोसँग सुत्न सक्नुहुन्छ।
राम्रो गुणस्तर: हामीसँग आफ्नै व्यावसायिक गुणस्तर नियन्त्रण टोली छ, अर्डर गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुहोस्
ढुवानी अघि पूर्ण राम्रो छ। ग्राहकलाई गुणस्तरको बारेमा कहिल्यै चिन्ता नगर्नुहोस्।
प्रतिस्पर्धी मूल्य: हामी भन्न सक्दैनौं कि हाम्रो मूल्य सबैभन्दा कम छ, तर हामी भन्न सक्छौं कि हाम्रो मूल्य भनेको ग्राहक हो
आवश्यक छ, हाम्रो समर्थनको आधारमा, तपाईंले थप पाउनुहुनेछ!
सानो मात्रा आदेश: हामी सानो अर्डर मात्रा स्वीकार गर्छौं, कम मूल्य पनि राख्नुहोस्।
सस्तो डेलिभरी: हामीसँग फर्वार्डरको साथ ठूलो छुट छ, सामानहरू तपाईंको छेउमा छिटो पुग्न र राख्नुहोस् सुरक्षा।
1. MOQ: हाम्रा धेरैजसो उत्पादनहरूका लागि, हामीसँग कुनै MOQ छैन, र हामी नि: शुल्क नमूनाहरू उपलब्ध गराउन सक्छौं जबसम्म तपाईं डेलिभरी शुल्क वहन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ।
2. भुक्तानी: हामी T/T, Western Union, र PayPal द्वारा भुक्तानी स्वीकार गर्छौं। उच्च मूल्य आदेशहरूको लागि, हामी L/C भुक्तानी पनि स्वीकार गर्छौं।
3. स्थान: हामी शंघाई चीन मा स्थित कारखाना हो।
4. हामी के गर्छौं: हामी धातु पिन, ब्याज, सिक्का, पदक, किचेन, आदि बनाउँछौं; साथै डोरी, क्याराबिनरहरू, आईडी कार्ड होल्डरहरू, रिफ्लेक्टिव ट्यागहरू, सिलिकन रिस्टब्यान्डहरू, ब्यान्डानाहरू, पीवीसी वस्तुहरू, आदि।
5. नेतृत्व समय: नमूना बनाउन को लागी, यो केवल4देखि 10 दिन लाग्छ डिजाइन को आधार मा; ठूलो उत्पादनको लागि, यसले 5,000pcs (मध्यम आकार) मुनिको मात्राको लागि 14 दिन भन्दा कम मात्र लिन्छ।
6. डेलिभरी: हामी DHL घरको ढोकाको लागि धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्यको आनन्द लिन्छौं, र हाम्रो FOB चार्ज पनि दक्षिणी चीनमा सबैभन्दा कम मध्ये एक हो।
7. प्रतिक्रिया: एक 20 व्यक्तिहरूको टोली एक दिन 14 घण्टा भन्दा बढी खडा छ र तपाईंको मेल एक घण्टा भित्र जवाफ दिइनेछ।
8. नवाचार: 2011 देखि4व्यक्ति डिजाइन टोली स्थापना भएको छ, र अब हामीले पहिले नै आर्टिगिफ्ट्स, शीर्ष 500, शीर्ष 100, T-Mobile र अधिक विश्वव्यापी 500 कम्पनीहरु संग सहयोग गरिसकेका छौं।
9. मूल्य: केवल व्यावसायिक निर्माताहरूले राम्रो लागत-प्रभावी उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्छन्।
1. के म उत्पादन नमूनाहरू प्राप्त गर्न सक्छु?
नमूनाहरू प्राप्त गर्न, कृपया हामीलाई ईमेल वा व्हाट्सएप मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्।
2. के तपाईंसँग सूची छ?
हो हामीसँग क्याटलग छ। हामीलाई एउटा पठाउनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। तर याद गर्नुहोस् कि Artigifts अनुकूलित उत्पादनहरू प्रदान गर्नमा विशेष छ। अर्को विकल्प हाम्रो एक प्रदर्शनी शो को समयमा हामीलाई भेट्न छ।
3. मसँग के ग्यारेन्टी छ जसले मलाई तपाइँबाट मेरो अर्डर प्राप्त गर्नेछु भनेर आश्वासन दिन्छ किनकि मैले अग्रिम भुक्तान गर्नुपर्नेछ? के हुन्छ यदि तपाईले पठाउनु भएको उत्पादनहरू गलत वा खराब बनाइएका छन्?
Artigifts 2006 देखि व्यवसायमा छ। हामी विश्वास गर्छौं कि हाम्रो कामले राम्रो उत्पादनहरू बनाउनु मात्र होइन हाम्रा ग्राहकहरूसँग बलियो र दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माण गर्नु हो। ग्राहकहरु माझ हाम्रो प्रतिष्ठा र उनीहरुको सन्तुष्टि नै हाम्रो सफलताको मुख्य कारण हो।
यसबाहेक, जब पनि ग्राहकले अर्डर गर्छ, हामी अनुरोधमा अनुमोदन नमूनाहरू बनाउन सक्छौं। उत्पादन सुरु गर्नु अघि पहिले ग्राहकबाट स्वीकृति लिनु पनि हाम्रो आफ्नै हितमा छ। यसरी हामी "बिक्री पछिको पूर्ण सेवा" किन्न सक्छौं। यदि उत्पादनले तपाइँको कडा आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन भने, हामी तपाइँलाई कुनै अतिरिक्त लागत बिना तुरुन्त फिर्ता वा तत्काल रिमेकहरू प्रदान गर्न सक्छौं।
हामीले ग्राहकहरूलाई विश्वास र विश्वसनीयताको स्थितिमा सेट गर्न यो मोडेल सेटअप गरेका छौं।
4. मैले पठाइएको मेरो अर्डरको ट्र्याकिङ नम्बर कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
जब तपाइँको अर्डर पठाइन्छ, एक ढुवानी सल्लाह तपाइँलाई उही दिन यो ढुवानी सम्बन्धी सबै जानकारी साथै ट्र्याकिङ नम्बर सहित पठाइनेछ।
5. तपाईं कारखाना वा व्यापार कम्पनी हो?
हामी कारखाना प्रत्यक्ष बिक्री हो।
अघिल्लो: लोगोको साथ सस्तो अनुकूलित लोगो टोट शपिंग ब्याग क्यानभास ब्याग कपासको झोला
अर्को: कस्टम प्रिन्ट सुपरमार्केट किराना प्रमोशन शपिंग गैर बुना क्यारी झोला बिना ल्यामिनेशन
कस्टम गैर बुना टोट झोला
गैर बुना टोट झोला
अनुकूलित हेम्प उपहार हेसियन प्राकृतिक जुट ड्र...
कस्टम प्रिन्ट सुपरमार्केट किराना प्रवर्द्धन पसल...
सस्तो अनुकूलित लोगो टोट शपिंग ब्याग क्यानभास ...
अनुकूलन सानो पारिस्थितिकी मैत्री जिपर मेकअप झोला सह ...
OEM व्यक्तिगत रंगीन मलमल अनुकूलन कपास ...
अनुकूलित लोगो मुद्रित पुन: प्रयोज्य किराना उपहार पी...